ပေကျင်းအိုလံပစ်က တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုမြှင့်တင်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း တရုတ်သံရုံးပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ အိုလံပစ်တာဝါတွင် ၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်မီးတောက်ထွန်းညှိထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လာမည့် ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအကြား နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများ နှင့် နှစ်ဖက်ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွင် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံး သံမှူးကြီး Jing Quan က ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ ဘဲဥပုံအမျိုးသားစကိတ်ကွင်း၏ ခန်းမတွင်းမြင်ကွင်းအလှကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် “ အားကစားဟာ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်ဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဖြေကြားရာတွင် Jing က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဟာ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးမြှင့်တင်ဖို့နဲ့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပိုမိုနားလည်ဖို့ သိပ်ကို အရေးပါတဲ့ နေရာက လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အတိအကျ ထင်မြင်မိပါတယ် ” ဟု Jing က ပြောကြားခဲ့ပြီး အားကစားပွဲကြီးသည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အကူအညီအထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအသီးသီးမှ အားကစားသမားများ အတူတကွ ဆုံတွေ့ပြီး အံ့ဩသင့်ဖွယ် စွမ်းရည်ပြသကြမည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် သဟဇာတဖြစ်စွာနေထိုင်ခြင်း ၊ အတူတကွလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း စသည့်အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ ပင်ပေါင်သံခင်းတမန်ခင်း” သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်က နှစ်နိုင်ငံအကြား ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် တရုတ်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြား ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့သည့် “အလွန်ထူးခြားသောအခန်းအကဏ္ဍ”တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း တရုတ်အရာရှိကြီးက ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်များတွင် နယ်ပယ်စုံချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား “ နက်ရှိုင်းသောအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု” ရရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်အတူ “ မတူခြားနားသော အဆင့်များတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကို အနီးကပ် ဆက်လက်ထားရှိကြောင်း” Jing က ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်က သိပ်ကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာက နှစ်ဖက်အကြား လွဲမှားတဲ့ နားလည်မှုတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပေါင်းကူးတံတားတစ်စင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားလိုပြီး လွဲမှားသော ကောက်ချက်ချမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် “အတက်အကျအနိုမ့်အမြင့်” အမြဲလိုလိုရှိနေစဉ်အတွင်းမှာပင် ဆက်ဆံရေးသည် “တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် နိုမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ရိုလာကိုစတာတစ်ခုလိုမျိုး အချို့ အခြေအနေတွေထဲကို ပြုတ်ကျသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး” ဟု Jing က ဆိုသည်။
“ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဖက်ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါကြောင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကို ပိုတိုး လုပ်နိုင်အောင် ၊ နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်တွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရိုးသားစွာ မျှော်လင့်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Jan. 19 (Xinhua) — The upcoming Beijing Winter Olympics will playavery important role in promoting people-to-people exchanges and bilateral relations between China and the United States, Minister Jing Quan of the Chinese Embassy in the United States said Tuesday.
“Sports isavery important part of that people-to-people exchanges,” which is the base of the bilateral relations, Jing said atavirtual press briefing on China’s preparations for the Winter Olympics that will take place on Feb. 4-20.
“Definitely I think the Beijing Olympic Games will playavery important role in promoting people-to-people exchanges, getting people better understand each other,” Jing said, adding it will be “helpful” for the development of bilateral relations.
“Ping-Pong Diplomacy” also playeda“unique role” in bringing China and the United States together some 50 years ago when the two countries were seeking for improvement of their relations, said the Chinese official.
Noting that the two sides “have deepened mutual understanding” over the past year through various communications, Jing said the Chinese side “will still stay in close touch at different levels” with the U.S. side this year.
“Our aim is quite simple. We want getting the relations better and stable, and we want to reduce misunderstanding between our two sides,” he said, adding the Chinese embassy wants to act asabridge between the two countries and reduce misperceptions.
While there are always “ups and downs” in the bilateral relations over the past decades, the relations “could not fall into some situation likearoller coaster, sort of spiral down,” Jing said.
“That’s not in the interests of our two nations, our two peoples. So we sincerely hope that we can communicate more, and we can cooperate on issues of mutual interests,” he said.
Photo(1) The Olympic flame for the 2022 Beijing Winter Olympics is on display at the Olympic Tower in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Wang Yong)
Photo(2) Photo taken on Jan. 22, 2021 shows the interior view of the National Speed Skating Oval in Beijing, capital of China. (Xinhua/Ju Huanzong)